ADVANTIKS FOR BISADAHA, DAROOGADA JARMALKA AH EE BARTA HARTZ, BUTOX, GUMEYSI SHAAMBO, JIMICSIGA KA SOO SHILIN, IWM - GURI, GURI
Waxyaabaha guud ee soo saareyaasha wax soo saarka ee boodada: Advantix ee bisadaha, Hartz, dhibco Barrier iyo walxo kale
Shalay ayaa xayawaankaaga xayawaankuna farxad iyo faraxsanaa, laakiin maanta waxay u muuqataa mid cakiran? Si dhaqsiyo leh ayuu uga soo baxaa qashin, qaniinkiisa dharkiisa yar yar ayuu ku dhaqaa?
Inta badan, martida aan la socon - boodada - waxay heleen xayawaankaaga.
Waxaad dhihi doontaa bisadu kama baxayso guriga, eeydu waxay ku socotaa dusheeda oo aan la kulmin xayawaanka kale mana ku dhici karto cayayaankaas.
Nasiib darro, ma doonayo inaan kaa xanaajiyo, laakiin xitaa xaaladahan, infakshanka leh boodada ayaa suurtagal ah.
Sidee boodada u heli kartaa xayawaanka guriga
Halkee baan ku qaadi karaa boodada? Meel kasta. Haddii aad u maleyneyso in boodada ku nool yihiin kaliya dhogorta xayawaankaaga, waad qaldan tahay. Dhalinyaro ku nool meel kasta.
Waxay ukuntooda u dhigaan meelo bannaan. Shakhsiyaadka ayaa kor u kaca aduunka oo dhan. Iyaga oo ah, waxba kama jiraan wax caqabad ah. Waxay ku sugi karaan dhibbanaha cawska ku dhow guriga., oo leh xayawaan qaba cudurka, waxay u boodaan xayawaan kale oo leh xawaaraha shidaalka. Qoys kasta ayaa keena dirxiga kabaha.
Tallaabooyin wax ku ool ah
Haddii xayawaanku u yimid xayawaankaaga, ma joogi doono, xayawaanka xayawaanka. Kadib marka la helo qaybta dhiigga, waxay tageysaa si ay u raadiso meel ay ku sii wado tartanka. Waxaa jira meelo badan oo loogu talagalay guriyahayaga. Qashin-xayawaan, dambiilaha bisadaha, roodhida roogga, daahyada looxo ... Xoriyaduhu waa kuwo aad u firfircoon.
Sidaa darteed, dagaalka lagula kaco iyaga waa in la fuliyaa dhawr tilmaamood markiiba.:
Ku dawee timaha xayawaanka leh alaab gaar ah.
Si loo qabto nadiifinta guud ee qolka oo dhan, eeyga ama bisadku waxay u guuraan qolalka oo idil, mana garan karno meesha ay caruurtu u diyaarinayeen inay ku noolaadaan.
Ku dhaq dharkaaga xayawaankaaga iyo alaabta carruurtu ku ciyaarto qalabka gaarka ah.
Cayayaankaasi ma khatar u yihiin bani-aadamka?
Waa muhiim! Waxay ka fiicantahay in laga hortago cudur kasta iyo muuqaalka cayayaanka marka loo eego lacagta iyo waqtiga daaweynta.
Miyuu khatar u yahay xayawaanka, dadkuna miyuu ku xanuunsan karaa? Waxaan ka jawaabeynaa kalsoonida. Marka lagu daro dhibaatada, boogaha ka dib cuncun qaniinyo ah, maqaarka ayaa xanaaqa, cayayaankaasi waa halisaha cudurada halista ah. Diyaargarow, tiradooda badan, waxay cabbi kartaa dhiigga dadka.
Sidee looga takhalusaa?
Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee lagu xakameyn karo xayawaanka? Waxaa jira jawaabaha ugu badan ee su'aashan sida jawaabcelin. Maanta, daawooyinka dunida oo idil waxay ku kobcinayaan boqolaal daroogo si ay uga takhalusaan boodada xayawaanka. Qaarkood waxay bixiyaan daawooyinka kaliya ee loogu talagalay bisadaha, kuwa kale eeyaha, ama eeyaha iyo bisadaha, oo loo yaqaan "hal dhalo".
Taageerada ugu qalanta ee xulashada maaliyaddan oo kale waxay siin kartaa takhasusle - dhakhtar xoolaad. Haddii aysan suurtagal ahayn, baro tilmaamaha si wanaagsan oo raac farsamo ahaan.
Waa muhiim! Daroogo dheeraad ah oo daroogada ah waxay keeni kartaa falcelis aan la saadaalin karin ee xayawaankaaga.
Dhibco, buufin, kiniinno, koolado - noocyo badan oo badeecado ah oo ay bixiyaan shirkadaha hormoodka ah.
Dhibaatooyinka Khadka Badan, si loo ilaaliyo xayawaanka, waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu fiican. Waxaa loo isticmaalaa lafaha, boodada, injirta iyo cayayaanka kale. Daroogadu waa mid waxtar leh (boodada iyo carruurtoodu waa la burburiyaa 1 cisho, shilinta 2 maalmood), oo la heli karo (waxaad ka iibsan kartaa dukaanka xayawaanka). Waxaa loo isticmaali karaa xayawaanka oo idil, marka laga reebo ubaxyada yar yar iyo ilmo yar (laga bilaabo dhalashada illaa 2 bilood) iyo xayawaan, daciif ah. Waa qaali qiyaas ahaan 700 Rug. Wuxuu u shaqeeyaa in uu la dagaallamo baaskiilada illaa 1 bilood, oo leh shilin ilaa 3 asbuuc.
Xiddiga Hoose ee Khariidadda laga bilaabo Ticks. Tallaabada walaxda firfircoon 1 bil gudaheed. Waxaad xakameyn kartaa haweenka uurka leh, ilmaha nuujinaya iyo dhalaanka cusub (2-3 maalmood jir). Markaad taabato, fiiri talaabooyinka taxadar leh. Ka fogow taabashada xayawaanka indhaha. Daroogadu waa wax ku ool ah, xayawaanka la daweeyey wuxuu leeyahay difaac dheer soconaya. Kharashka daroogada waa mid aad u sarreeya, laga bilaabo 1,5 kun oo raqiis ah.
Frontline NexgarD Meelaha la kariyo. Cusub Shirkadda ayaa ballanqaadeysa in 25-30 daqiiqo gudahood ka dib markii codsiga, boodada ay bilaabaan in ay dhintaan. Ka dib maalin ka mid ah shakhsiyaadka nool waa inaysan joogin. Tuubooyin ayaa ku dhinta 48 saacadood ka dib. Ilaalinta xayawaanku waxay sii socotaa bil kale. Daroogadu waxay ku fiicantahay dhadhanka, waxay leedahay saameyn dhakhso ah, oo sahlan in la isticmaalo. Maamulka muddada dheer maaha wax la jeclaan karo, xayawaanka ayaa ka sii daraya. Waa qaali, 1600 - 1800 rubi.
Advantiks waa dhibco, daroogada si loola dagaallamo boodada, nadiifinta, injirta, shilinta dhammaan heerarka horumarinta. Ficilku wuxuu bilaabmaa 12 saacadood ka dib marka uu ku daboolo dhibcaha dushooda iyo xayawaanka xayawaanka. Laguma talineynin xayawaanka jiran iyo kuwa daciifka ah, xaamilada uurka leh iyo kuwa nuujinaya, ubadka ilaa 2 bilood. Codsiga kadib waxaa lagama maarmaan ah in xayawaanka lagu ilaaliyo. Dareen-celinta maqaarka waa suuragal. Waxay ku kacaysaa 1500 raqiis.
Duufaan Bolfo. Waxay leedahay ur ah oo gaar ah, waxaa fiican in laga soo saaro hawada furan. Ka ilaali xayawaanka in ka badan 2 jeer toddobaadkii. Ha u isticmaalin daawada loogu talagalay caruurta iyo caruurta da'doodu ka yar tahay 2 bilood. Way fiicantahay inaad isticmaasho habka lagu noolaan karo ee ku dul-noolayaasha (baakadaha, roogga, iwm.) Ma aha mid qaali ah, qiyaastii 350 RUB. Maqnaansho mudo dheer.
Xerooyinka Foresto. Bayer waxaa laga yaabaa in soo saaraha ugu fiican. Dabaqadaha Foresto waa qaabka ugu dambeeyay. Daboolka ayaa lagu qiyaasi karaa dherer ahaan, oo laga heli karaa laba nooc eeyaha eyda yaryar iyo weynba. Tallaabo dheer, ilaa 8 bilood. Markaad qubeysid xayawaan, waa in aan laga saarin qoryaha. Si ka duwan sida daroogooyinka kale ma laha ur aan fiicnayn. Waa qaali, qiyaastii 2 kun oo rubi.
Kiltiks collars. Tallaabada walaxda firfircooni waxay soo saartey soo-saaraha ugu yaraan 6 bilood, laakinse waa wax aan ka badneyn 4. Qoryaha ayaa u nugul cayayaanka. Ma laha ur wacan, dhibcaha maqaarku waa suurtogal. Kharashku ma ahan 500 - 700 Rug.
Hartz Ultra Guardiola Dhibco loogu talagalay ka hortagga iyo xakameynta boodada, shilinta iyo kaneecada. Waxay hoos u dhigtaa biyaha aan haysan, oo shaqeynaya 1 bil. Waxaa laga heli karaa qiyaaso kala duwan eeyaha iyo bisadaha. Maaha kuwo qaali ah, 550 - 650 rubi. Laguma talineynin xayawaanka difaaca jirka. Wax ku ool ah, dareen diidmo oo aan lahayn xasaasiyad. Marar dhif ah iibka.
Kiniiniyada Bravecto loogu talagalay in ay la dagaalamaan boodada iyo shilinta waxayna leeyihiin saameyn dheeraad ah ilaa 12 toddobaad. Mararka qaarkood waxaa jira wax saameyn ah marka aad qaadato. Kharashka hal kiniini waa 1300 rubi.
Gambaska dufanka ah. Naqshadeeyay bisadaha oo diida inay xidhaan kabaha. Nabadgalyo, habab badan oo wax ku ool ah oo looga hortagi karo badbaadinta bisadaha ee dulinka. Xayawaanka waa in aan la daaweyn wax ka badan hal mar bishii. Qiimaha waa qiyaastii 80 RUB.
Ku buufinta Leopard iyo dhibcood - daroogada guriga. Way jaban yihiin. Wax ku ool ah. Laguma talin in la isticmaalo ubadka iyo caruurta yar yar.
Dhalada iyo caloosha Celandine waxay awoodi doonaan inay ilaaliyaan xayawaanka rabaayada illaa hal ilaa laba bilood. Laguma talin in loo isticmaalo ubaxyada iyo caruurta yar yar ee ka yar laba bilood.
Oo hadda erayada yar oo ku saabsan dawooyinka aan ku jirin dib u eegista, laakiin waxaa laga heli karaa suuqa Russia:
Daawooyinka iyo wakiillada loo isticmaalo boodada ayaa si cad u sheegi kara Bimeda cararaya. Aerosol Tani waxay ka dhigan tahay "garaacista macnaheedu" sababtoo ah waxa kaliya oo aan xakameyn cayayaanka. Waxay u adeegtaa si loola dagaallamo duullaankii boodada, caarada boodhka iyo hoos u dhaca xasaasiyadda ee xaaladaha gudaha.
Bimeda looma jeedo in lagu maareeyo xayawaanka!
Flea waxay ku dhacdaa Barrier - dareeraha cad, oo aan qadhaad lahayn, oo lagu duubo tubaakooyinka ku habboon ee loo isticmaalo qiyaasidda socodka dhaqaalaha. Haysashada mindhicirka iyo ficilka xiriirka, wuxuu leeyahay 3 halis oo halis ah.
Dhibaatooyinka BlochNet - Daroogo badan oo ka mid ah daroogada ayaa kuu ogolaanaya inaad dooratid ikhtiyaarka saxda ah ee xoolaha kala duwan iyo miisaanka. Waxaa lagu dabaqaa maqaarka, ma geli karo dhiigga, laakiin waxay ku urursan tahay epidermisku waxay leedahay saameyn dheer.
Dhaqdhaqaaqyada dhibcaha ah ee boodada iyo shilinta - wakiil waxtar u leh antiparasitic oo leh ficil fara badan oo ficil ah. Badbaadinta dadka iyo xayawaannada, oo aan ku faafin dhiigga, biyaha aan dherarrada lahayn, waxaa loo isticmaali karaa ubadka 8 bilood.
Shampoo for bisadaha Gamma - Iska ilaali cayayaanka oo ku habboon bisadaha iyo eeyda labadaba. Saamaynta hooseysa, wax saameyn ah ma laha.
Sida iska cad, doorashada daawooyinka antiparasitka ee suuqa Suuqa Ruushka waa ballaaran ku filan oo aad si fudud u doorato mid ku haboon xayawaankaaga.